Seranam-piaramanidina tsara indrindra any Azia Vaovao momba ny dia
Seranam-piaramanidina tsara indrindra any Azia
Fitsangatsanganana sy mpizahatany | | Fitsangatsanganana any Azia, Flights
Alohan'ny hanombohanao hitsangatsangana any Azia, ary hamandrika ny tapakilan'ny fiaramanidintsika dia tsara ny mahafantatra hoe iza izy ireo ny seranam-piaramanidina tsara indrindra eto amin'ny kaontinanta Tsy mieritreritra ve ianao?
Misy karazany ny zotram-piaramanidina, toy ny B2B, entana ary ireo izay natokana manokana amin'ny famindrana ny mpandeha. Ity farany dia fantatra ihany koa amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Ny ankamaroan'ny firenena aziatika ankehitriny dia manana kaompaniam-pitaterana an-toerana mihoatra ny iray, ary rehefa mandeha ny fotoana, nahatratra ny fenitry ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tsara indrindra eran'izao tontolo izao izy ireo. Ity misy famerenana fohy, amin'ireo izay heverina, na ny mpampiasa ampahibemaso na ny orinasa hafa, ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tsara indrindra manidina ny lanitra aziatika.
Mazava ho azy, tato anatin'ireo taona faramparany dia nisy ny fifanarahana nifidianana Singapore Airlines, toy ny tsara indrindra amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka aziatika. Singapore Airlines dia tokony hanome amboaram-boninahitra andiany maro noho ny kalitaony amin'ny fiheveran'ny mpandeha azy, ka dia mitohy izany iray amin'ireo seranam-piaramanidina malaza indrindra any Azia.
Taorian'ny nisarahany tamin'ny fifanarahana Malaysia / Singapore tamin'ny 1972, izay misy fiaramanidina folo fotsiny, mpiasa 6000 ary zotra fitaterana roa amby roapolo dia nihahery. Singapore Airlines amin'izao fotoana izao dia manidina any amin'ny tanàna maherin'ny 90 any amin'ny firenena 40, ary ao anatin'ny Star Alliance, nanomboka ny volana aprily 2000.
Singapore Airlines dia miavaka amin'ny fampidirana andian-tsarimihetsika izay tsy nampiasaina teo aloha. Tato ho ato, napetraka ny seza mihaja, ny sakafo nahandro iraisam-pirenena ary ny rafitra fialamboly manan-tsaina, izay ahafahan'ny mpandeha misafidy ny sarimihetsika tadiavin'izy ireo, ankoatry ny tombony hafa.
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa mifaninana amin'ny tsena ho an'ny tsara indrindra amin'ny lanitra aziatika dia: Asiana Airlines rehetra, fantatra koa amin'ny anarana ANA, amin'ny fiandohany. Ity zotram-piaramanidina ity dia laharana faharoa amin'ny laharana voalohany amin'ny fitaterana iraisam-pirenena. Any Japon dia manana zotra 49 izy, ary koa manao lalana roa ambiro roapolo mankany amin'ny toeran-kafa hafa eto amin'izao tontolo izao ivelan'ny sisintaniny. Toy ny Singapore Airlines dia manana fiheverana manokana ireo mpandeha anao, izay anomezany fampiononana lehibe indrindra.
Iray amin'ireo seranam-piaramanidina be mpitady indrindra ao amin'ny tsena Aziatika, ny China Eastern Airlines. Tahaka ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa voalaza etsy ambony, ity orinasa ity dia mitandrina manokana amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifany, manolotra izay rehetra azo atao, ary koa ny kalitaon'ny mpiasa sy ny sain'ny olona ambony indrindra. Ity zotram-piaramanidina ity miasa amin'ny ankamaroan'ny sidina eto an-toerana, nefa manolotra zotra iraisam-pirenena maro karazana koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Seranam-piaramanidina tsara indrindra any Azia
Fanny Bedriñana dia hoy izy:
Andriamatoa Carlos. Mitovy hevitra aminao aho. Manoratra aminao aho mba hiresahana manokana. Raha Ramatoa Emilia ny reninao dia te hifandray aminao aho.
Valiny tamin'i Fanny Bedriñana
Ny tsangambato malaza indrindra any Bruxelles
Milan, renivohitry ny lamaody (Ia)